Mourinho: Kubadda PSG Oo Kale Lagama Ogola England
HomeChampions LeagueMourinho: Kubadda PSG Oo Kale Lagama Ogola England
Tababaraha Chelsea, Jose Mourinho ayaa ka hadlay guul darradii kooxdiisa ka soo gaadhay Jose Mourinho ciyaar xalay dhex martay Chelsea iyo PSG, taas oo ku dhamaatay 2-2 hase yeeshee celcelis ahaan ay soo baxday PSG, halka Chelsea ay sidaa kaga hadhay Champions League.
Qaybtii hore ee ciyaarta waxa kaadhka cas loo taagay weeraryahanka Zlatan, waxaanay ciyaarta oo dhan PSG ku dhamaystay 10 ciyaartoy.
Mourinho ayaa warbaahinta la hadlay markii ay ciyaartu dhamaatay waxaanu dhalleeceeyey qaabka kubbad ciyaarista ee PSG oo uu ku tilmaamay mid dhiirranaan iyo gardarro ku dheehan tahay, isla markaana ay sidii kulankii hore oo kale mar kale ku celiyeen.
“Sidii si la mid ah ayay sameeyeen. Way dhiiranaayeen oo ay gardarro badnaayeen sidii si la mid ah, waana waxa ay qaaraddu (Yurub) ugu yeedho xariifnimo. Ingiriiska lagama ogola xariifnimada, adeegsiga caqliga iyo khibradda.” Sidaas ayuu yidhi Jose Mourinho.
Mourinho Waxa uu si gaar ah ugu canaantay ciyaartooyada PSG dabaal-deggoodii markii ay dhaliyeen goolka labaad, waxaanu yidhi: “Tusaale ahaa, markii ay dhaliyeen goolka labaad ciyaartu way sii dhamaanaysay. Wakhti ayay dabbaal-deggii ku qaateen, dhaawacyo aan jirin ayay isla tureen, beddel ayay sameeyeen. Si ay ciyaarta u joojiyaan ayay waxaas u samaynayeen si aanaan annagu yeelin markii ay 1-0 ahayd ee ay shanta daqiiqo ka hadhsanaayeen, markaa waxay ila tahay in ay tahay quruxdu kubadda Ingiriiska, laakiin marka aad u baxdo kubadda cagta ee qaaradda (Yurub), kooxaha kale aad ayay ugu diyaarsan yihiin maskax ahaanna inay halgan galaan ayay diyaar u yihiin, waana qayb weyn oo ciyaarta ka mid ah.”
Mourinho waxa uu sheegay in kooxdiisu ay labada goolba ku horreysay oo ay ciyaartuna gacanta ugu jirtay, laakiin kooxda ka soo horjeedday ay ahayd mid awood badan oo u ciyaaray si ka wanaagsan sidii ay Chelsea ciyaarta u wadday.
“Dabcan, ciyaarta annaga ayay gacanta noo gashay laba jeer, laakiin kooxda aanu la ciyaaryanay way naga xoog badnayd. Waxay u dagaallameen si fiican oo cadaadis ayay na saareen. Waxaaban is leeyahay markii ay tobanka ciyaartoy noqdeen (casaankii Ibrahimovic kadib) ayay cadaadiska badan na saareen”. Ayuu yidhi.
Mourinho waxa uu intaa raaciyey in PSG ay ka go’nayd in ay guul la hoyato, isla markaana ay si fiican u habaysnaayeen si ay guusha u gaadhaan.
Tababarahan xamaasadda badan ayaa waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay kooxdiisu awooddeeda oo dhan dul dhigi doonto tartanka Premier League si ay u xaqiijiso in ay sannadkan ku guuleysato.
“Ciyaartooyadayda waan u sheegay sida aan mar walba sameeyo, taasina ma aha in miisaska iyo kuraasta la laag-laago marka ay ciyaartu dhamaato. Waa wakhtigii la is dejin lahaa ee la qiimayn lahaa kooxda sababtoo ah ciyaar ayaa na sugaysa Sabtida, waana khasab in aanu ku guuleysano Permier League. Waxa aanu ciyaaraynaa tartanka Permier League oo ay noo hadhsan yihiin ciyaaro badan” sidaas ayuu yidhi Mourinho.
Ciyaarta dhex martay Chelsea iyo PSG ayaa waxa ay 90kii daqiiqo ee caadiga ahaa ku dhamaadeen 1-1 kadib markii daqiiqaddii 81aad uu difaacyahanka Cahil uu u dhaliyey Chelsea gool balse shan daqiiqo kadib uu David Luiz u dhaliyey PSG goolka barbar dhaca. Tani waxay khasab ka dhigtay in ciyaarta lagu daro wakhti dheeraad ah maadaama lugtii hore ee labada kooxoodna lagu kala baxay 1-1. Waxa la go’aamiyey in 30 daqiiqo oo dheeraad ah la sii wado ciyaarta, waxaana dhashay laba gool oo kale oo ay labada kooxood u kala dhaliyeen Hazard iyo Thiago Silva, sidaana waxa ku baxday PSG, maadaama ay garoonka Chelsea ku dhalisay 2 gool.
Daawo hadallada Mourinho:
Ronaldo Oo Laga Reebay Ciyaarta Celta Vigo Ee Berri
Manchester United oo £57million Ku Dooneysa Cavani Iyo Silva
Uruguay Oo Talyaaniga Ka Reebtay Koobka Aduunka Una Gudubtay Wareega 16-Ka